ဒီတပတ် English American Style Idioms ကဏ္ဍမှာ မျက်မှောက်သတင်းလောကမှာ သုံးနှုန်းနေတဲ့ အီဒီယံအသုံးတချို့ဖြစ်တဲ့ တို Cold shoulder, Sweetheart deal, Back-to-back့ ကို တင်ပြထား ပါတယ်။
(၁) Cold Shoulder
Cold (အေးစက်တာ)၊ shoulder (ပခုံး) ဖြစ်ပြီး တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က အေးစက်တဲ့ ပခုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးဆင်းသက်လာတာကတော့ ရှေးတုန်းက သာမန်အားဖြင့် လူတွေအနေနဲ့ ကိုယ်ခင်မင်တဲ့ဧည့်သည်က အိမ်လည်လာလို့ဧည့်ခံ ကျွေးမွေးမယ်ဆိုရင် ချက်ပြီသား ဆိတ်ပခုံးသားကို ပူပူနွေးနွေး နွှေးကျွေးတတ်ကြပေမယ့်၊ မကြိုက်တဲ့ ဧည့်သည်ကို ဧည့်ခံရင်တော့ ချက်ပြီးသား ဆိတ်ပခုံးသားကို ပြန်မနွှေးဘဲ အအေးအတိုင်း ကျွေးတဲ့ဓလေ့ကနေ၊ ဒီအသုံးဆင်းသက်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီ Idiom ကို ပေးတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ Give ဆိုတဲ့ ကြိယာနဲ့တွဲ ပြီး “Give the cold shoulder” လို့ သုံး လေ့ရှိပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ လူတဦးကို အေးတိအေးစက်ဆက်ဆံတာ၊ ဖော်ဖော်ရွေရွေမရှိတာ၊ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ မဆက်ဆံတာ၊ နှုတ်မဆက်တာ၊ မသိချင်ယောင်ဆောင်တာ၊ ခပ်စိမ်းစိမ်းနေတာ ၊ အဖက်မလုပ်တာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို မကြာမီက သံတမန်ကြေးနန်းပေါက်ကြားမှုမှာ အမေရိကန်သမတ Donald Trump ကို အရည်အချင်းမပြည့်ဝသူလို့ ဝေဖန်ထားတဲ့ ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီး Kim Darroch ကို Trump ကလဲပြန်ဝေဖန်ခဲ့ပြီး သံအမတ်ကြီးနဲ့ ရှေ့မှာဆက်ဆံစရာမရှိတဲ့အကြောင်း သူ့Twitter ကဆင့်တုံ့ပြန်ခဲ့တာတွေဖြစ်ပွါးခဲ့ခြင်းအပြီး၊ သံအမတ်ကြီးလဲရာထူးကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့၊ Scotland ထုတ် The Herald သတင်းစာကြီးမှာ “Donald Trump's cold shoulder strategy spelled end for Ambassador Sir Kim Darroch” Donald Trump ရဲ့ အဖက်မလုပ်တဲ့ဗျူဟာက သံအမတ်ကြီး Sir Kim Darroch ရဲ့ ရာထူးသက်တမ်းကို နိ၈ုံးချုပ်ဖို့ကိန်းဆိုက်စေခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ခေါင်းကြီးနဲ့ ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Mary က ညက ပါတီပွဲမှာ John အပေါ်ခပ်စိမ်းစိမ်းဆက်ဆံခဲ့တယ်။ သူစိတ်ဆိုးနေလို့ ဖြစ်နိုင်တယ်။
(၂) Sweetheart Deal
Sweetheart (ချစ်သူရည်စား) deal (သဘောတူညီမှု၊ အပေးအယူလုပ်မှု) ဖြစ်ပြီး စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က ချစ်သူရည်စား သဘောတူညီမှု ဖြစ်ပါတယ်။ လူ့ သဘာဝအားဖြင့် sweetheart ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူရည်းစားအကြိုက်လိုက်လုပ်ပေးဖို့အဆင်သင့်ရှိကြတဲ့အတိုင်း ၊ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်က နေ့စဉ်ဘ၀မှာ တဘက်လူ နှလုံးခိုက်စရာ၊ သွားရည်ကျစရာဖြစ်တဲ့အပေးအယူလုပ်မှုမျိုး သဘောတူညီမှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးလောကမှာ ငွေ ၊ ရာထူး၊ အခွင့်အရေး စဖြင့် တဘက်သဘောကျဖြစ်စေမဲ့အပေးအယူလုပ်တဲ့ကမ်းလှမ်းချက်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အဆုံးအဖြတ် ပေးနိုင်တယ် ဒါမှမဟုတ် power (အာဏာ) ရှိတဲ့ လူတဦးအကျိုးကိုရှေ့ရှုပြီး သူသဘောကျစေမဲ့၊ သူ့ အကြိုက်ဖြစ်မဲ့၊ သူ့ အတွက်အကျိုးရှိစေမဲ့ အပေးအယူလုပ်မှုမျိုးကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ကမ်းလှမ်းချက်မျိုးဟာ အများအားဖြင့် ဥပဒေနဲ့မညီ၊ ကျင့်ဝတ်နဲ့ မကိုက်ညီဘဲ လာဘ်ထိုးတာမျိုးလည်း ရောက်နိုင်တယ်ပါတယ်။
ဒီအသုံးကို အသက်မပြည့်သေးတဲ့မိန်းခလေးငယ်တွေကို လိင်လုပ်ငန်းမှုအသုံးပြုမှုနဲ့အရေးယူခံထားရတဲ့ New York Billionaire သူဌေးကြီး Jeffrey Epstein နဲ့ပတ်သက်လို့ ၊ ၂၀၀၈ ခု က ထိုစဉ် Florida ပြည်နယ် Miami မှာ အစိုးရရှေ့နေအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး၊ ခုလက်ရှိ သမတ Trump အစိုးရမှာအလုပ်သမားဝန်ကြီးဖြစ်သူ Alex Acosta က ထိုစဉ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံ့ရှင်ကြီး Epstein အမှုမှာ ဘက်လိုက်ပြီး လိုက်လျော်ရာရောက်တဲ့အပေးယူလုပ်ခဲ့ပြီး ၊ ထိထိရောက်ရောက် ဥပဒေအရအရေးမယူခဲ့တဲ့ ကိစ္စကို သတင်းမီဒီယာတွေကပြန်ဖေါ်ထုတ်ပြီး၊ ၀န်ကြီး Acosta ကို အလုပ်ဖြုတ်ပစ် တောင်းဆိုမှုတွေတိုးခဲ့လို့ သောကြာနေ့ကပဲ အလုပ်ကနေ နှုတ်ထွက်သွားခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ CNN သတင်းဌါန ကြီးက “Breaking down Epstein's sweetheart deal “ Epstein အကြိုက်လုပ်ခဲ့တဲ့အပေးအယူ ကို အသေးစိပ်အချက်အလက်တွေ ပြန်စီစစ်ခြင်း ဆိုတဲ့ခေါင်းကြီးနဲ့ ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
The protesters raised concerns when they found out about the “sweetheart deal” between the foreign mining company and local officials.
နိုင်ငံခြားသတ္တုတွင်းကုမ္ပဏီ နဲ့ ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကြား တဘက်အကြိုက်အပေးအယူလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေ့ ရှိခဲ့တဲ့စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မှုတွေကို ဆန္ဒပြသူ တွေကတင်ပြခဲ့ကြတယ်။
Back (နောက်ကျော) to Back (နောက်ကျောသို့) ဖြစ်ပြီး စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က နောက်ကျော တခုကနေနောက်ကျော တခုသို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးရဲ့  အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်က နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ တခုက လူတဦးနဲ့နောက်တဦး ကျောခြင်းကပ်ရပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တမျိုးက ဖြစ်ရပ်တခုအပြီးအလားတူဖြစ်ရပ်မျိုးနောက်တခါဆက်တိုက်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို မကြာသေးမီက ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာကစားခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးကမ္ဘာ့ဖလားဘော်လုံးပွဲမှာ Netherlands အသင်းကို နှစ် ၈ိုး ၈ိုး မရှိ နဲ့နိုင်ခဲ့ပြီး ဗိုလ်စွဲခဲ့တဲ့အမေရိကန်ဘော်လုံးအသင်း ဟာ ၁၉၉၁ ၊ ၁၉၉၉ ၊ ၂၀၁၅ တို့မှာဗိုလ်စွဲခဲ့ပြီး ၊ ခု လည်း ၂၀၁၉ မှာလဲ စတ္ထုထအကြိမ် ဗိုလ်စွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၄ နှစ်တကြိမ်ကျင်းပ တဲ့ FIFA အမျိုးသမီးကမ္ဘာ့ဖလား ဘော်လုံးပွဲ မှာ ၂၀၁၅ နဲ့နောက်တကြိမ် ၂၀၁၉ မှာ ဆက်တိုက်အနိုင်ရလိုက်တဲ့အတွက် USASOCCER.com မှာ “USA Wins Back-To-Back Women’s World Cup Titles with 2-0 Triumph against The Netherlands” ဆိုတဲ့ခေါင်းကြီးနဲ့ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
They are planning to show the two films back-to-back this afternoon.
သူတို့ကရုပ်ရှင်နှစ်ကားကိုဒီညနေ တကားပြီးတကား ဆက်တိုက်ပြဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။